Waa kuma wadaadka Faransiiska ah ee magangalyada weydiistay Turkiga? - Jigjiga Online
HomeDiintaWaa kuma wadaadka Faransiiska ah ee magangalyada weydiistay Turkiga?
Mid ka mid ah hoggaamiyayaasha bulshooyinka Muslimiinta ee ku nool dalka Faransiiska Idriss Sihamedi, ayaa dalka Turkiga weydiistay magangalyo siyaasaadeed ka dib markii dowladda Faransiiska ay xirtay hay’ad Islaami ah oo uu hoggaaminayay.
Dowladda Faransiiska ayaa albaabada isugu dhufatay hay’adaasi gargaarka oo ah mid ka mid ah hay’adaha Muslimiinta ugu ballaaran dalka Faransiiska oo lagu magacaabo BarakaCity.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Darmanin oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal ayaa sheegay in go’aankaasi lagu gaaray kulan ay yeesheen golaha wasiirada Faransiiska.
Wuxuu ku dooday inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaayo Islaamiyiin xagjir ah, wuxuuna ku eedeyay inay cudur daar u sameeyeen weerarrada argagixisada.
Idriss Sihamedi, ayaa beeniyay eedeymaha loo so jeediyay hay’addiisa oo gargaar gaarsiisa 2 milyan oo qof oo ku kala nool 26 dal . Muddo 10 sano ah ayay shaqeyneysay BarakaCity.
Mr Idriss ayaa isagoo boggiisa Twitter-ka isticmaalaya waxa uu ka dalbaday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu magangalyo siyaasadeed dalkiisa ka siiya.
” Waxaa jeclaan lahaa in aniga iyo shaqaalahayga(BarakaCity) inaan magangalyo weydiisano Turkiga maxaa yeelay ma dareemaya inaan ku badqabno gudaha Faransiiska”, ayuu ku soo qoray bartiisa Twitterka isagoo adeegsanaya luuqadda Turkiga.
Bartamihii bishan Oktoobar ayay boolisku u dhacen gurigiisa, xabsiga ayayna u taxaabeen. Balse maalin ka dib waa la soo daayay.
Waxay qeyb ka ahayd dhowr goobood oo ay boolisku weerar ku qaadeen ka dib markii madaxweynaha Faransiiska uu wacad ku maray inuu la dagaalami dono Islaamiyiinta ”gooni u socodka” ee ku nool dalka. Wuxuu sidaa ku yiri khudbad muran badan dhalisay oo uu jeediyay isagoo diinta Islamakana ku sheegay ”Diin bartamaha uga jirta xasaarad dunida oo dhan”